Barakacaayasha kunool Degaano katirsan koonfur galbeed oo biyo la’aan ka cabanaya (dhegayso) – Radio Daljir
Barakacaayasha kunool Degaano katirsan koonfur galbeed oo biyo la’aan ka cabanaya (dhegayso)
Maarso 3, 2018 1:32 g 0
Xilliga Jiilaalka lama gaarin, waxaa lagu jiraa bishii ugu horraysay ee seddexdii bilood ee Gu’ga. War iyo ceel biyo kuma jiraan dhulkana wuu qalalay oo xoolaha geed ay goostaan malaha, waxaa jira haraad iyo gaajo ay dadka kaga barakacayaan deegaanadii ay ku noolaayeen.
Subax walba waxaa soo gaara Magaalada Baydhabo dad ay soo barakicisay abaarta kuwaasoo ku biiraya xerooyinka ay ku jiraan barakacayaashii horay ugu sugnaa magaalada oo iyagaba tooda u yaabanaa oo habeen maalin cabasho u gudbiniyay maamulka gobolka ,degmada iyo dowlad goboleedka koofur galbeed soomaaliya.
Afhayeenka Madaxtooyadda Maamulka Koon fur galbeed Soomaaliya Nuura diin Yuusuf Abuukar Gacma oo sugan hadda ,Magaala madaxda gobolka Bay waa Baydhabo, oo magaala madaxda Soomaaliya ee Muqdisho u jirtaa 256 km oo ay kaga aaddan tahay dhinaca waqooti-galbeed ayaa waxaanu ka warraysanay Xaaladda Abaareed iyo Biyo la’aanta .
Wariyaheena Axmed Sheekeeye Ayuu Khadka telefoonka ugu warramay .
Aqoonyahano ka hadlay Heshiiski DP World iyo Somaliland & Hadalkii Khayre (dhegayso)